Adeegga damaanada - Shenzhen PUAS Industrial Co., Ltd.
Dhamaan alaabada ka timid PUAS oo leh damaanad sadex sano ah.
Dhammaan alaabada leh dhibaatada tayada leh,, waxaan si toos ah u siin doonnaa alaabo cusub oo lagu beddelo saddex bilood gudahood.
Waxaan kaliya bixinnaa RMA ama qaybo bilaash ah oo loogu talagalay adeegga maareynta in ka badan badeecadaha 3 bilood.
Intaas oo dhan taariikhda waxaa qortay S / N
Kala duwan oo damaanad ah
1.Alaabada mudada damaanad qaadida ah, isla cilad waxay dhacdaa 3 bilood gudahood markii la dayactiray, waxaana lagu dayactiri doonaa si bilaash ah.
2.Duo in lagu qasbo sabab sharaf (Sida Dagaal, Dhulgariir, Hillaac, iwm) ama adeegsi aan habooneyn, Khaladaadka rakibaadda iyo hawlgallada kale ee aan caadiga ahayn ama shil markii lagu guuldareysto laguma daboolayo damaanad qaadka bilaashka ah.
3.Dhammaan alaabooyinka waa in ay qaataan xirmo kala qeybsan iyo daabacaadda qalabka wax lagu duubo ee asalka ah. Haddii aad isticmaasho guud ahaan burburka baakadaha uruurinta ee ay keeneen nooca badeecada ama aanad isticmaalin gaadiidkii baakadka ee asalka ahaa, kuma xirna baaxadda dammaanadda bilaashka ah.
4.Mamnuuco isticmaaleha rukhsad la'aan ogolaanshaha inuu kala fidiyo mashiinka, isticmaaleha si uu u kala diro alaabada la dayactiray, kuma koobna damaanad qaadka bilaashka ah. Wixii alaab qalad ah muddada damaanad qaadka, shirkadda waxay hirgelisay nolosha oo dhan waxay bixisaa adeegyo dayactir oo lacag leh.
5.Cilladaha alaabada ee badeecada gudaheeda muddada damaanada, fadlan buuxi foomka macluumaadka dammaanadda si sax ah. Sharaxaad ka bixi cillad-darada si faahfaahsan. Oo aad siisid qaansheegadka iibka asalka ah ama nuqulkiisa.
6.Waxaa khasaaraha iyo khasaaraha ka dhashay isticmaalkiisa si gaar ah dalabkiisa. Warshadu ma yeelan doonto wax khatar ah iyomas'uuliyad. Magdhowga warshadda ee lagu sameeyay jebinta iimaanka. Dayacaad ama jirdil dartiis kama badnaan doonto qadarka
ee alaabada. Warshadu ma qaadi doonto mas'uuliyad gaar ah, lama filaan iyo sii wadida burburka ay sababeen sabab kasta.
7.Shirkaddayadu waxay leedahay xaqa ugu dambeeya ee sharraxaadda shuruudaha kor ku xusan.
1.Iibsaduhu wuxuu u baahan yahay inuu u soo diro alaabooyinka cilad-darrada cinwaankeenna ku xusan macluumaadka kaararka dammaanadda.
Qiimaha dhoofinta ee RMA ama la beddelay
2.Shirkaddu waxay kaliya bixin kartaa kharashka dhoofinta hal dariiq oo ka yimaada soo-saaraha ilaa qaybiyaha Channel ama iibsadaha.
Dhammaan dhamaadka dhamaadka isticmaaleha tooska ah ee shirkaddeena, fadlan la xiriir iibkayaga hore.